Ururka Ahlu Sunna Waljamaaca oo ku eedeeyay dowladda federaalka Soomaaliya in ay ka baxday heshiiskii ay la gashay - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaUrurka Ahlu Sunna Waljamaaca oo ku eedeeyay dowladda federaalka Soomaaliya in ay ka baxday heshiiskii ay la gashay
August 27, 2019 Puntland Mirror Somalia 0
Shiikh Shaakir, madaxa Ahlu Sunna Waljama. [Sawir Hore]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ururka Ahlu Sunna Waljamaaca ayaa ku eedeeyay dowladda federaalka Soomaaliya in ay ka baxday heshiiskii ka dhaxeeyay, sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay masuuliyiinta Ahlu Sunna maanta oo Talaado ah.
Waxaa kale oo ay sheegeen in dowladda federaalka Soomaaliya ay ciidamo ka soo buuxisay deegaankooda.
Ahlu Sunna oo katirsanayd maamulka goboleedka Galmudug ayaa dhawaan khilaaf soo kala dhexgalay madaxweyne Axmed Ducaale Geele Xaaf, taasoo sababtay in Galmudug ay dhowr dhinac u kala jabaan.
Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in shir maamul loogu dhisayo Gamudug ay ku qabanayso magaalada Dhuusamareeb, taasoo maalmihii u dambeeyay ay dowladdu geynaysay ciidamo badan kuwaasoo ay ku sheegtay in ay qayb ka qaadan doonaan amniga.
Baarlamaanka Soomaaliya oo ansixiyay golaha wasiiradda cusub oo uu soo dhisay Raysulwasaare Khayre
Muqdisho-(Puntland Mirror) Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta oo Arbaco ah ansixiyay golaha wasiiradda cusub ee uu dhawaan soo dhisay Raysulwasaare Xasan cali Khayre. 241 xildhibaan ayaa fadhiyay kulanka baarlamaanka, 224 ayaa cod gacantaag ah ku ogolaaday [...]